Apple iPhone Yakareba Vhidhiyo Zvekutengesa Spoof
NeChishanu, Gunyana 21, 2012 NeChishanu, Gunyana 21, 2012 Adam Mudiki
It's Friday and time for some levity! I truly enjoy a good spoof and love when it's targeted towards a company like Apple (of which I'm a total fanboy). Brand perfection brings with it the opportunity for ridicule… and this video from Satire zvipikiri! Kunyangwe iro gitare zano rakanaka kutonhorera 🙂
PS: Kutenda kuna Ben McCann pa Catalist Kubvunza yekugovana ichi chiwanikwa!
hilarious… asi kune "fanboy" kumusoro uko. Icho chokwadi chekuti URI fanboy chinoratidza kushomeka kwakakwana kwekunzwisisa tekinoroji, kushambadzira uye hypnosis. apple inoshandisa yakawanda yemari irimo mukushambadzira iyo inonanga mapoka anokatyamadza evanhu vanoda kuisirwa wen it comes to tech, asi iine hunyanzvi hunyanzvi hunyanzvi, zviri nyore kupangidza uye vanoda kurota. Hapana chakashata nekurota, asi nekushandisa hypnosis muzvishambadziro, maapuro anokudziridza meseji dzakavanzika dzinofadza vadikani vehunyanzvi, dzinovasanganisa nepfungwa yekurota / kuve vakasiyana uye pakupedzisira vanobatanidza izvo nechiratidzo chemaapuro. Ehezve vanhu vachati izvi hazviitike, asi zviri nyore kuzviita kana paine zvinhu zviri kuitika zviri pasi pezera ravo rekuziva. Zvakare, maapuro anogadzira mashambadziro anoita kuti vashandisi vafunge kuti vari kuwana hunyanzvi hwekucheka mabhureki apo muchokwadi ivo vanowanzo kuve stale, yekare hardware iyo yavanowana isingadhuri, uye vachitengesa nemitengo yepamusoro. Iyo imac ndiyo muenzaniso wakakwana. Apple kuve "mutsva" inofanirwa pamutengo we $ 2000 kungopa chete zvazvazvino mu Hardware yeiyo imac yavo? Zvakaipa, pachinzvimbo PC yaive neiyo core i7 kweanoda kusvika makore maviri, apuro yakanga ichiri kutumira lousy core2duo cpu kune vatengi vasina fungidziro.
Nekudaro, Whey ini ndinoti ivo havana kunyatsoita sehunyanzvi sezvavanotenda ivo vari. Uye izvo zvinonhuwa chaizvo, nekuti mac vatengi vane hombe hombe yevanhu vanotenda kuti kugadzirisa vhidhiyo pane izvi ndiko kwakanyanya. Asi zvingaite makumi mana kana makumi mashanu muzana kureba kupa chero chinhu pa $ 40 imac pane zvaizoita pa $ 50 pc inomhanya windows. Chokwadi vanhu vachati, "windoze, omg, windows mugadziri wemamuvhi", asi mushure mekunge uchengetedze $ 2000 pane pc, kutenga $ 700 kusvika $ 1300 chirongwa chekugadzirisa vhidhiyo hachisi chekufunga. KANA kuwana imwe yemahara pawebhu. Asi vazhinji fanboys mafansboys nekuda kwekutaura kwekunyengera kunopihwa naMabasa panguva yemisangano yakakosha. Kwete kutaura kuti hapana zvirinani zvishoma zvinotonhorera zvinhu uye mazano uye budiriro, asi yega yega yandinotarisa yakavanza nhema mairi, kuwedzeredza uye zvichingodaro. Iyo inogara iri fomula yakafanana. Mabasa mujean, kubata vanhu vazhinji nemusoro, KANA kushambadza-zvine mac zvine mafuta mukomana ari PC uye mutete mukomana ari mac, kuseka pc nezvimwewo. Mabasa ane mazana emavhidhiyo kwaanonyengedzawo zvakare. Mune imwe yekare inobvuma kuti zvese ndezvekutengesa, uye inoti yanga ichichinjisa nzira yeNike sneaker yekutengesa macs. Usataure nezvemapipi kana megahertz, taura chete nezveramangwana, uye vanhu vakaita zvinhu zvikuru, saEinstein, nezvimwe. KwaNike vakangoshandisa Michael Jordon na shazam, kutengesa kwakapetwa kana. Kwandiri, apple iri uye inogara iri nhema, kunyanya kune avo desktop desktop.
Hypnosis? Chaizvoizvo? Izvo hazvipikise fungidziro yako yekuti ivo havana tech savvy?
Uye ini handikwanise kuwana tsananguro dzako dzinovimbika kune imwecheteyo uye inopesana nekuita zvaunofanira kuita kwandiri. Zviri pachena kuti haufarire Apple uye haushandise zvigadzirwa. Ini chaizvo ndashandisa zvese Microsoft neApple. Muchokwadi ini ndichine PC yakanaka kwazvo pamba. Asi Mac yangu inokurumidza, yakavimbika, uye yakanaka. Uye yeshamwari dzangu dzakatenga iyo $ 700 PC yaunotsanangura, ivo vakapfuura nepakati pezvitatu zvezvinhu zvepurasitiki zvine mutsindo panguva imwe chete yandakave neyangu Mac Book Pro.
Ah .. uye iOS7 inotyisa! Unakirwe uchitsvaga bhatani rako rekutanga… rakadzoka here?